Tababar Kusaabsan Maaraynta, Hogaaminta Iyo Maamulka-Suuban - Cakaara News
Tababar Kusaabsan Maaraynta, Hogaaminta Iyo Maamulka-Suuban
Jigjiga( cakaaranews ) Khamis 7dii April 2016, Waxaa maanta ka bilowday hoolka shirarka ee hotel Hamda ee magaalada Jigjiga wareegii 3aad ee tababarkii soo Socon jiray mudada ee maaraynta, hogaaminta iyo maamulka suuban ee la siinayay hogaamibta sare ee wasaarada caafimaadka iyo xafiisyada ay bah-wadaagta yihiin.
Hadaba,Tababarkan ayaa waxaa saaka furitaankiisii hadalo muhiim ah ka soo jeediyay Kusimaha Madaxa Xafiiska Caafimaadka DDSI mudane Xasan Ismaaciil Cali, oo si fiican u qeexay ahmiyada tababarkan. Isagoo sheegay in ujeedada tababarkani ay tahay sidii loo kobcin lahaa garaadka aqoomeed ama awoodooda hogaamineed ee dhanka maamulka suuban iyo ka midha dhalinta qorshaha caafimaadka ee shantan sano dhamaan hogaaminta sare ee sector ka caafimaadka.
Ugu danabayna wuxuu masuulku tilmaamay in tababarkani uu socon doono mudo sadex maalmooda. Wuxuuna kula dar'daarmay ka soo qayb galayaashi in ay sifiican uga faa iidaystaan casharada islamarkaana ay ilaliyaan saacadaha uu casharku socdo.
Sikastaba ha ahaatee, tababarkan oo ay kasooqaybgaleen 50 xobnood oo ka kala yimid xafiisyada kala ah xafiiska caafimaadka DDSI, xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS ka, wakaalada dabagalka cuntada iyo daawooyinka ee DDSI, iyo zonal health focal persons ayaa waxa larajaynayaa in ay kubaran doonaan cahshro wax wayn katari doona ka midho dhalinta qorshayaasha u yaala caafimaadka.